ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ရထားဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရရှိမည် RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Automation Systems ကYaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပစ္စည်းကိရိယာ CCTV System ကိုများအတွက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် »
2, 4,6နှင့်7ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု 1924 စုစုပေါင်းစက် Butt ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် 7790 စုစုပေါင်းAlüminotermitရထားဂဟေဆော်ခြင်းစုစုပေါင်း 9714 စုစုပေါင်း ray အရင်းအမြစ်န်ဆောင်မှုများ၏ဝယ်ယူရေး 4734 အမှတ်အဆိုပါအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေကြောင့်သာအီလက်ထရောနစ်ကမ်းလှမ်း, 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် လုပ်. ECAP ပတ်ဝန်းကျင်ထဲကယူလိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
KN: 2019 / 308700
ခ) လိပ်စာ: စီးပွားရေးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ Hippodrome Anafartalar Caddesi ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအဘယ်သူမျှမရပ်ကွက်:306340 Anafartalar Mah ။ ALTINDAĞ / တူရကီ
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4211 - 3123115305
က) အမည်: ယူနစ်Alüminotermitရထားဂဟေဆော်ခြင်း ray အရင်းအမြစ်အမှုကိုပြုခံရဖို့ဒ 2, 4,6နှင့်စာတိုက်၏71924 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Butt ဂဟေဆော်ခြင်းစက် 7790 9714 စုစုပေါင်းအရေအတွက်က
(စက်ယန္တရား, Ray ရှည်> 1924 မီတာ) 72 အရေအတွက်Alüminotermitရထားဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု (ခြပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Ray ရှည်> 6590) 72 အရေအတွက်Alüminotermitရထားဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု (ဆင့်ကဲထောက်ပံ့ရေး, ရထားအမြင့် = <1200 M က) ၏ငွေလက်ခံပြေစာ၏ငွေလက်ခံပြေစာ Making welding 72 Piece Butt
ဂ) လုပ်ရမည် / Place အပ် 2, 4,6။ ။ ။ နှင့်7။ ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများနယ်နိမိတ်အကြားကျန်ရှိလိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လုပ်လိမ့်မည်။ အသေးစိတ်နည်းပညာ Specification ထွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင် 12 သည့် နေ့မှစ. (တကျိပ်နှစ်ပါးသော) လအတွင်း: ဃ) ကာလ / Delivery နေ့စွဲ
ဃ) အလုပ်နေ့စွဲ စတင်. : 15 စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ. ရက်အတွင်းအလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 20.08.2019 - 10: 00
ခ) တင်ဒါကော်မရှင်အစည်းအဝေးများ၏အရပ်ဌာန (ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်): TCDD ယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း (အခန်းအမှတ် 4052)
တင်ဒါကြေငြာချက် - ရထားလမ်းရထားနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက်: ရထားလမ်းတင်းပါးဂဟေနှင့် Aluminothermite alın
တင်ဒါအသိပေးချက် - စက်ရထားသံသံဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်
တင်ဒါအသိပေးချက် - Aluminothermite ရထားဂဟေနှင့် On-Site İhale
တင်ဒါအသိပေးချက် - Aluminothermite ရထားလမ်းဂဟေဆော်သောလုပ်ငန်းခွင်…
Butt Welding Machine နှင့် Aluminothermite Rail Welding …
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: Aluminothermite ရထားလမ်းဂဟေဆော်Yapıl
တင်ဒါအသိပေးချက်: Ulukışla - Tiftehan တင်းမာမှုကင်းမဲ့ခြင်းအကြား…
တင်ဒါအသိပေးချက် - စက်ရထားသံ Butt Welding Yap
တင်ဒါကြေငြာချက် - Saydings တွင်ရထားဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Done ယောဘသည်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးရထားလမ်းတွင်မှ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ray Butt ဂဟေဆော်ခြင်းစက်န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးယောဘသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဈ၏ Ray Butt ဂဟေဆော်ခြင်းစက်စီးပွားရေးန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူ